ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးခလုတ်ခုံကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 26, 2014 ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 25, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအတွက် Martech ကိုပြင်ဆင်နေသည်မှာနေ့ရောညပါပါ ၀ င်နေပါသည်။ အလုပ်မှာဘလော့ပို့စ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကိုပြန်သွားရမယ်၊ ငါတို့မှာပုံတွေတင်ထားတာသေချာတယ်၊ အကြောင်းအရာကခေတ်ကုန်နေပြီ (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြတ်လပ်သွားတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေလို)၊ ငါတို့မှာထူးဆန်းတဲ့ပြproblemsနာတွေမရှိတာသေချာအောင်လုပ်တယ်။ တင်ပို့ချက် ၁၀၀ လောက်လိုတယ်။ ငါ code အတိုအထွာများအတွက် html encoding က, နှင့်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးကြောင်း။ ကျနော်တို့နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်စာရင်းစစ်လုပ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြခဲ့ crappy spam က်ဘ်ဆိုက်များတစ်တန် disavowed ။
နောက်ထပ်တိုးမြှင့်မှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည် SSL ကိုလက်မှတ် ခဲမျိုးဆက်နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ထဲသို့ထပ်ထည့်မည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောဆိုဒ်ရှိခြင်းသည်အနာဂတ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ်ကောင်းကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုဂူးဂဲလ်ကအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်မဟုတ်ပါ။ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲအားလုံးဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသွားအလာနှစ်ဆမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒီကနေစခရင်ပုံ Semrush:
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤကဲ့သို့သော Martech တွင်အချိန်များစွာလုပ်ရန်မရိုးသားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြlookingနာများကိုရှာဖွေနေသော site ကိုခြစ်ရန် tools များစွာကိုအသုံးပြုပြီး၊ Google Search ကို Console ထုတ်ဝေသည် ... ထပ်တူခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့
ဒါကြောင့် ... ငါ logged သည့်အခါငါ့အတုံ့ပြန်မှုစိတ်ကူး Google Search ကို Console ယခုအပတ်ဤအရာသည်
ငါ Webmasters အတွက်အမှားအယွင်းများများအတွက်စစ်ဆေးပြီးနှင့်အမှားများကိုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးသည် CMS SEO ဆိုသည်မှာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - robots.txt ဖိုင်၊ ကျွန်ုပ်၏မြေပုံတည်နေရာများ၊ ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းများ…အရာအားလုံး! ငါ (ဥပမာပြစ်ဒဏ်) မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆိုစစ်ဆေးသည်။ ငါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းခံရသော်လည်း Webmasters တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားသည်ဟုမတွေးမိပါ။
ပြီးတော့ငါ့ထံသို့လာ။ အဘယ်သို့လျှင် Google Search Console သည်လုံခြုံသောလမ်းကြောင်းလိုအပ်သည် ဆိုက်ကို? ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ် https: //martech.zone အစား http://martech.zone။ တကယ်တော့ header tag ပြောင်းစရာတောင်မလိုပါဘူး။ ဤတွင်ပေါ်လာတဲ့အရာ:
ဂူဂဲလ်…မင်းကငါ့ကိုလုပ်နေတာတွေကိုကြောက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အလွန်ဆိုးရွားသည့်အရာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေခြင်းကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ခဲ့သည်ဟုထင်ခဲ့သည် ဝိုင်
Tags: google webmastersgoogle webmasters tools များhttp seohttps seohttps webmastersseo မဟုတ်သော sslseo sslNon-ssl seo နှိုင်းယှဉ် SSLSSL ဝက်ဘ်မာစတာဝက်ဘ်မာစတာကိရိယာများWEBMASTERSဝက်ဘ်မာစတာများ httpsဝက်ဘ်မာစတာ ssl